चिनियाँ विदेशमन्‍त्री काठमाडौं ओर्लिए, यस्तो छ तीन दिने कार्यतालिका !
चिनियाँ विदेशमन्‍त्री काठमाडौं ओर्लिए, यस्तो छ तीन दिने कार्यतालिका !
काठमाडौं - चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यी काठमाडौं आइ पुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले स्वागत गरे। वाङ पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादबाट विशेष विमानमा भारतीय आकाश हुँदै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। मौसम खराब हुँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी चढेको विमान केही समय आकाशमै होल्ड भएको थियो ।
ज्ञवाली वाङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको वार्तापछि राजनीतिक भेटघाटको तय गरिएको छ। त्यसअघि चिनियाँ टोलीलाई चिनियाँ दूतावासले यहाँको अवस्था बारे र भइरहेको कामको जानकारी दिने कार्यक्रम छ। सोमबार हुने वार्तामा नेपालको तर्फबाट ज्ञवालीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्र, अर्थ र अन्य केही मन्त्रालयका सचिव र सहहचिव वार्तामा रहनेछन्।
वाङले काठमाडौमा रहदा सीको नेपाल भ्रमण र त्यतिबेलाको एजेण्डालाई अन्तिम रुप दिन भनिएको छ। नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत उनले नेपाली पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन्। नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआई) अन्तरगत रहेको कार्यक्रमलाई उठाउने छ। नेपालको तर्फबाट पनि दिइएको परियोजना वा चयन भएका नौ परियोजनाको अवस्थाको बारेमा बैठकमा समीक्षा हुनेछ। उक्त बैठकमा केही सहायता सम्बन्धी सहझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण र सुरक्षा विषयमा पनि छलफल हुनेछ।